Ahmed waxuu ku shaqeeya toban karon saacaddii - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ahmed waxuu qaataa saacaddii 10 kronor iyo 40 öre. sawir: Stina Linde/Sveriges Radio.
Ahmed waxuu ku shaqeeya toban karon saacaddii
Liiskayga Finns på Min sida
La daabacay måndag 11 april 2016 kl 12.49
Maqaaxi ku taal gobolka Blekinge ayaa shaqaaleehada magangeliyo doonka ah u siisa mushaar shaacaddii toban karoon, iyadoo dadkan shaqeeyaan saacaddo badan.
Sidaas waxaa baaritaan ku ogaatay laanta P4 Blekinge oo ukuurgashay suuqa shaqada madow ee laamaha adeega.
Ahmed, oo magaciisa runta ah si kale yahay, waxuu ka shaqeeyaan maqaaxi ku taal bariga Blenkinge. Waxuu magaaxidaan ka shaqeeya 12 saacadood maalinkii, lix maalmood todobadkii.
Mushaarkuna? waa toban karoon iyo 40 öre
In aan ku daalo lacag sidaas u yar waxay ugu dhalisaan dareen aad u xun, laakiin ama wa in aan yeelo sharuudaha mulkiila ama shaqo la’aan ahaado
Ayuu yeri Ahmed.
Laysku qariyo laylis
Warqad ahaan Ahmed waxuu maqaayadan ka sameynayaa laysk maadaame mulkiilaha maqaaxida heshiis laylis ah la galay hey’adda socdaalka. Rasmi ahaan waxay tahay in Ahmed siddeed saacadood laylis ahaan kaga shaqeeyo maqaaxida, shan maalmood toodbaadkii.
Mana ahan in uu qabto shaqada shaqaalaha rasmiga ah ee maqaaxida balse hadefka waa sidii uu u baran lahaa luuqadda af iswiidhishka.
– Weli wax af iswiidhish ah kamo baran maqaaxida, ayuu yeri.
Ahmed keli kuma ahan in uu mushaarad u dhigmo adoonsi ku shaqeeyo waqti dheer maalin kasta . Laanta P4 Blekinge ayaa la kulantay ugu yaraan toban ruux oo kale magangeliyo doon ah oo suuq madow ku shaqeeya. Waxay iskaga mid yahiin in dhamaantood deganyahiin Blekinge iyo in layliska ay ku qoranyahiin lagu qariyo shaqo suuqa madow ah.
Dhammaantood aan ka heyn Ahmed way ka gabsaden in ay la hadlaan weriyaasha P4 Blekinge, waxay sheegeen in ay cabsanayaan in la ogaado haddii ay raadiyaha ka hadlaan.
Xataa sidoo kale Ahmed waxuu ka cabsanayaan in la ogaado. Laakiin saas oo ay tahay waxuu doortay in uu weriyaasha la hadlo oo uu ka sheekeeyo xaalkiisa. ”qalad ayuu yeri in aan canshuru baxinin” inkasta oo uusan ka maarmin dhaqli yarka ah ee maqaaxida sida suuqa madow ah uga soo gala.
– Gunooyinka aan ka helno hey’adda Migrationsverket aad ayey u yartahay. Waxaa u baahanahay lacag aan u diro qoyskeyga ku sugan xeryo qaxooti oo ka baxsan Yurub, ayuu yeri Ahmed.
Shaqadiisa waa mid culeys badan, aamlmaha shaqaduna dheeryahiin. Ahmed ayaa maainsan in aysan suurtogal aheyn in awoodo ka sii shaqeynta maqaaxida.
Asagoo madaxa luaxhaya waxuu yeri:
– Ma garanayo, lago yaabeen dhowr bilood oo kale. Shaqadan waa mid aad u culus oo silic badan, ayuu yeri.
Isha: P4 Blekinge